IVolocopter Chengdu: Kumenyezelwe ukuqhutshwa kwezindiza ezihlangene zaseJalimane naseChina
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » IVolocopter Chengdu: Kumenyezelwe ukuqhutshwa kwezindiza ezihlangene zaseJalimane naseChina
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Izindaba zaseJalimane • Investments • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-UAM isho indlela entsha yezokuthutha zasemadolobheni esebenzisa izindiza zikagesi ezisuka mpo kanye nokwehla (eVTOL) ukuhambisa abantu noma izimpahla ezindaweni eziphansi zasemadolobheni nezasemadolobheni. Kuyasiza ukukhulula ubunzima emigwaqweni yasemadolobheni ekhula kakhulu futhi kuvumela abantu nezimpahla ukufinyelela ezindaweni zabo ngokushesha nangokuphepha.
IVolocopter yaseGerman ihlangene neGeely Holding Group ukusungula ubambiswano eChengdu, eChina.
Umsebenzi ohlanganyelwe uzosingatha ukukhiqizwa nokusebenza kwemakethe kwemikhiqizo yeVolocopter emakethe yaseChina.
Umsebenzi ohlanganyelwe uhlela ukusiza ukukhuthaza ukuhamba komoya emadolobheni eChina eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu ezayo.
Inkampani entsha yezindiza ehlangene, ebizwa ngeVolocopter (Chengdu) Technology Co., Ltd., noma iVolocopter Chengdu ngamafuphi, imenyezelwe yiVolocopter yaseGerman, ingcweti ekwakhiweni kwezimoto zomoya ezizimele, kanye nasenkampanini engaphansi kwesibili yeGeely Holding Iqembu.
Umsebenzi ohlanganyelwe uzoba seChengdu, inhlokodolobha yesifundazwe esiseNingizimu ntshonalanga neChina iSichuan, futhi uzobhekela ukukhiqizwa nokusebenza kwemakethe yemikhiqizo yeVolocopter emakethe yaseChina.
IVolocopter Chengdu iphinde yasayina ama-oda neVolocopter yezindiza eziyi-150, kufaka phakathi izinto ezisetshenziswayo zezindiza zasemoyeni nezindiza ezinamadoda.
Izimoto zomoya nezingxenye zazo zizokhiqizwa eHubei Geely Terrafugia, okuyisizinda sokukhiqiza iGeely eChina, ngokusho kwalolu hlelo.
UVolocopter Chengdu uzophinde ahambele umbukiso we-13th China International Aviation and Aerospace Exhibition (Airshow China) ngoSepthemba 28.
"Namuhla kuphawula enye ingqopha-mlando ebalulekile ohambweni lwethu lokuletha ukuhamba okungabizi komoya kagesi eChina, okuyithuba elikhulu emakethe elilodwa embonini ye-UAM," kusho uFlorian Reuter, oyi-CEO ye IVolocopter.
IVolocopter njengamanje ingumkhiqizi wezindiza wokuqala futhi kuphela emhlabeni we-eVTOL othole ukwakheka nokwamukelwa kwemikhiqizo I-European Union Aviation Safety Agency.